Hadurree fayyistuu, Oromo Edition of The Healer Cat por Tuula Pere (Tapa dura) | Peter Books
Oromo Edition of The Healer Cat
Seelas hadurree fayyistuun, kennaa isheetiin naannoo keessaati guudddaa kan kabajamtuu miiseensaa kan taate dha. Fedhii jaartii mana ishii iraatti hundooftee, yeroo ishiin hojii hi qabne mana ho’aa kessatii dabarsuu jaalatii.
Haati illeettii gargaarsa gaafachuuf iyyaan naannoo jeeqti ture. Iyyi ishii yeroo dheeraa Seelasiin gargarsa akka ishii hin didne waan godheef, hadurree fayyistuun cabbii haalkaniin fi qorra nyaataa keessatii fudhattee baate. Dukkana bosonaa keessa, Seelasiin waan bay’ee wanta sodaachisu wajjin fuulaan waan walitti dhufteef jabina qabdu hunda sassaabachuuf dirqamtee turte.
Edda deemsi haalkanii akka gaariitti raawwatee, bosona qorre qofaa osoo hin ta’iin onnee seelasiin illee bay’ee ho’isuuf aduun baate.